अमेरीका र रसियाले सिरियामा मच्चाएको नरसंहारकाे विरोधमा नेपाल…. – पुरा पढ्नुहोस्……
अमेरीका र रसियाले सिरियामा मच्चाएको नरसंहारकाे विरोधमा नेपाल….
काठमाडौं, फागुन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट अखिल (क्रान्तिकारी)ले अमेरीका र रसियाले सिरियामा गरेको अन्यायपुर्ण आक्रमणको बिरोध गरेको छ । सङ्गठनले सोमबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय क्याम्पससहित उपत्यकाका सबै क्याम्पसहरुमा बिरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
मानव अधिकारको रक्षाका लागि अपिल तथा उत्तर साम्राज्यवाद अमेरीकालाइ पछि हट्न चेतावनी दिदै सङ्गठनले प्रदर्शन गरेको क्रान्तिकारीले जनाएको छ ।अमेरीका र रसियाले मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन गर्दै सिरियामा गरेको आक्रमण निक्कै नै निन्दनीय भएको भन्दै क्रान्तिकारीले सांकेतिकरुपमा बिरोध प्रदर्शन गरेको बताएको छ । क्रान्तिकारीले “ब्याकअफ अमेरिका, मानवताको रक्षा गरौं, उत्तर साम्राज्यवाद -मुर्दावाद” जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेको छ । त्यस्तै संगठनका महासचिव दिपेन्द्र चलाउने लगाएत गिरफ्तार नेता कार्यकर्ताको रिहाइको माग समेत गरेको छ ।
सिरियाली सरकारले विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्रमा हवाई आक्रमण जारी राखेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदमा युद्धविरामको प्रस्ताव पारित भएपछि पनि सिरियाली सरकारले हमला जारी राखेको हो ।पछिल्लो हमलामा क्लोरिन जस्तै रासायनिक हतियारको समेत प्रयोग गरेको बताइएको छ । लामो समयदेखि हिंसाको चपेटामा पर्दै आएको सिरियामा एक साता यतामात्र ५०० भन्दा बढी बालबालिका र ५ हजार बढी महिला पूरूष मारिएको विभिन्न समाचार एजेन्सीले जनाएका छन् ।
राजधानी दमास्कस नजिकैको गुटा सहरमा सिरियाली सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा ठूलो जनधनको क्षति भएको बताइएको छ । सो क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूह (आइएस) को अन्तिम गढ मानिएको छ ।सिरियाली सेना र रुसले समेत सो क्षेत्रमा सैन्य कारवाही तीव्र तुल्याएको छ । पश्चिमा मुलुकको गठबन्धन पनि सिरियामा बेलाबखत हवाई हमला गर्दै आएको छ । तर सिरियाली सेना र रुसको एउटा गठबन्धन छ भने पश्चिमा मुलुक अर्को गठबन्धन बनाएर हमला गर्दैछन् । पश्चिमा मुलुकले सिरियाको विद्रोही समूहलाई हातमा लिएको छ, जो राष्ट्रपति बसर अल असदलाई सत्ताबाट हटाउन चाहन्छ । तर रुसले राष्ट्रपति असदलाई सहयोग र समर्थन गर्दै आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति दुई ध्रुवमा विभाजित भएको मौकाको फाइदा उठाउँदै आइएसले सिरियामा आफ्नो गतिविधि बढाउँदै गएको छ । राष्ट्रपति असद भने मुलुकबाट आइएसको प्रभाव अन्त्य गर्ने भन्दै सैन्य कारवाहीलाई अनुमोदन गर्दै आएका छन् । गुटा सहरमा भएको पछिल्लो हवाई हमलामा सहर नै कुरुप बनेको छ । कुनै घर यस्ता छैनन्, जो सग्ला हुन् । सहर एक खण्डहरमा परिणत भएको छ भने कयौं नागरिक मारिएका छन् । मारिनेमा बालबालिकामात्र ५०० भन्दा बढी रहेको बताइएको छ ।
शव गाड्न चिहानका लागिसमेत जमिनको अभाव हुन थालेको बताइन्छ । जताततै शव गाडिएको छ । यसैबीच जर्मनी र फ्रान्सले सिरियामा युद्धविरामका लागि ‘अधिकतम दवाव’ दिन रसियालाई आग्रह गरेका छन् ।जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केल तथा फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई फोन गरी सिरियाको गुटा क्षेत्रमा पछिल्लो समय सयौँको ज्यान जाने गरी भएको द्वन्द्वबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै सिरियामा जारी द्वन्द्वलाई तत्काल रोक्न दवाव दिन आग्रह गरेको जर्मन चान्सलर मर्केलको कार्यालयले जनाएको छ ।-सत्यसमाचारबाट
Prevनेपालले पायो अहिलेसम्मको विद्वान अर्थमन्त्री, चिन्नुहोस् को हुन् उनि ?
Nextसिरियाका एक बालकले गरे विश्वभरका मानिसलाई यस्तो आव्हान… (भिडियो सहित )
नयाँ बेहुलालाई अपहरण गरेर फेसबुक बाटै थर्कायो अपहरणकारिले -(हेर्नुस् भिडियो)
दशैं सकिन लाग्दा घट्यो सुनचाँदीको मूल्य यस्तो छ आजको भाउ…